COVID-19 ကာကွယ်ဆေး | IU Health
IU Health is pleased to provide you with the latest updates and explanations for the COVID-19 vaccine you need.
English / Español / Hakha / 中文
IU Health သည် COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ဖြန့်ဝေရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ သင် နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးထွက် သတင်းများ၊ ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များ နှင့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
The Food and Drug Administration has approved three vaccines for emergency use. The FDA approved emergency vaccines from Pfizer and Moderna in December. The vaccine, developed by Johnson & Johnson, was approved on 27 February. Other COVID-19 vaccines are in different stages of clinical trials. If you have any questions about COVID-19, please read the answers below.
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
ယခုအချိန်တွင် မည်သူက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်သနည်း။
လတ်တလောအချိန်တွင် အသက်5နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူတိုင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသည်။ အသက် 5-17 နှစ် အရွယ်ရှိသော လူနာများအတွက် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကိုသာ ထိုးပေးပါသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသည့် IU Health တည်နေရာကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာတွေ့နိုင်သနည်း။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဆိုင်များနှင့် အရေးပေါ် စောင့်ရှောက်ရေးနေရာများအပါအဝင် IU Health တည်နေရာများစွာတွင် ရနိုင်ပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ပေးနေသည့် သင်အနီးရှိ IU Health တည်နေရာကို ရှာပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းကို မည်သို့စီစဉ်နိုင်သနည်း။
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် သင့်လျော်ပါက ရက်ချိန်းစီစဉ်ရန်အတွက် ourshot.in.gov တွင် ဖတ်ရှုပါ သို့မဟုတ် 211 သို့ဖုန်းဆက်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာတွင် ဇစ်ကုဒ် နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့် နေရာများကို မြေပုံပေါ်တွင် ရှာဖွေပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းကြိုတင်စီစဉ်စရာ မလိုသည့် နေရာအချို့ ရှိပါသည်။ ရက်ချိန်းကြိုတင်စီစဉ်စရာမလိုသော နီးစပ်ရာ နေရာများကို ရှာဖွေရန် ourshot.in.gov တွင် ကြည့်ရှုပါ။
IU Health နေရာတွင် လာမည့်ရက်ချိန်းကို ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသည့် ဆေးခန်းတစ်ခုခုတွင် ရက်ချိန်းစီစဉ်ထားပါက ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းရန် 211 ထံသို့ မည်သည့်အချိန်မဆို ဖုန်းဆက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်လည်း သင့်ရက်ချိန်းကို ပြောင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ရက်ချိန်းမတိုင်မီ 48 နာရီအတွင်းဖြစ်ပါက ရက်ချိန်းဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းရန်အတွက် သတိပေးချက်ပို့ပေးသည့် တက်စ် သို့မဟုတ် အီး‌မေးလ် တွင်ပါသည့် လင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
ကျွန်ုပ်၏ CoVID-19 မှတ်တမ်းများကို မည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း။
သင်၏ CoVID-19 ကာကွယ်ဆေးကတ် ပျောက်ဆုံးသွားပါသလား။ သင် CoVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးကြောင်း အထောက်အထား လိုအပ်ပါသလား။
အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၏ Access Indiana services ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး သင်၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးလက်မှတ် ရရှိ ရန် Indiana Vaccination Portal (အင်ဒီယာနာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဆိုင်ရာပေါ်တယ်) ကို ရွေးချယ်ပါ။ အကောင့်တစ်ခုကို လက်မှတ်ထိုးဝင်ပါ သို့မဟုတ် အသစ်ပြုလုပ်ပါ၊၊ ထို့နောက် သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် ပုံစံကို ဖြည့်ပါ။ ထို့နောက် သင်၏ကာကွယ်ဆေးထိုးလက်မှတ်ကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
IU Health သည် အင်ဒီယာနာ ကာကွယ်ဆေး မှတ်ပုံတင်ဌာနအား ကာကွယ်ဆေးမှတ်တမ်းများအားလုံးကို မျှဝေပေးသည် ။ အင်ဒီယာနာပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ ခြင်းဆိုင်ရာ ပေါ်တယ်ပေါ်တွင် အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှု 24 နာရီအထိ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
သို့မဟုတ် My IU Health သည် သင်၏ IU Health ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွင် ပါဝင်သည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအားလုံးကို ပြသပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် မကြာသေးမီက IU Health နှင့် တွေ့ဆုံမှုတစ်ခု ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင် သင်၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သတင်းအချက်အလက်ကို Health Services မှတစ်ဆင့် My IU Health တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ပင်မမီနူးမှ "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း" ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို "ဆေးခန်းမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ်" အတွင်း "ကာကွယ်ဆေး" အပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသင့်သည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးကို မည်သူများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
ထပ်ဆင့်တိုးထိုးဆေးများကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်-
အနည်းဆုံး လွန်ခဲ့သည့် ငါးလခန့်က Pfizer ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့် အသက် 12 နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူတိုင်း။
အနည်းဆုံး လွန်ခဲ့သည့် ငါးလခန့်က Moderna ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့် အသက် 18 နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူတိုင်း။
အနည်းဆုံး လွန်ခဲ့သည့် ငါးလခန့်က Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့် အသက် 18 နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူတိုင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုက်ညီသူများအားလုံးကို ထပ်ဆင့်တိုးထိုးဆေးများ ထိုးရန် အလေးအနက်တိုက်တွန်းပါသည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်စေရန် ထပ်ဆင့်တိုးထိုးဆေး လိုအပ်ပါသည်။
ourshot.in.gov သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး စာမျက်နှာ၏ထိပ်နားရှိ “Click here to findavaccination site" ကို နှိပ်၍ သင့်အနီးနားတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်သည့် တည်နေရာကို ရှာနိုင်ပါသည်။ နေရာအများအပြားတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးထားပါသည်။
မိမိ၏ ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးကို ရောစပ်ထိုးနိုင်ပါသလား။
ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်သူများအနေနှင့် မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်အနေနှင့် မူလက Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလျှင် Johnson & Johnson ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော် သင့်အနေနှင့် ပိုနှစ်သက်မည်ဆိုပါက Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ထဲမှ တခုခုကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မိမိအနေနှင့် အဘယ်ကြောင့် ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးရန်လိုအပ်သနည်း။
လက်ရှိကာကွယ်ဆေးများသည် ဆေးရုံတက်ရခြင်း နှင့် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွမ်းကျင်သူများအနေနှင့် အနည်းအကျဉ်းမှ အလယ်အလတ် ပြင်းထန်မှုရှိသော ရောဂါဖြစ်သူများကို စတင်တွေ့ရှိနေပါသည်။ ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသောသူများကို လာမည့်လများအတွင်း ကာကွယ်ပေးသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု နှင့် မိခင်နို့တိုက်ခြင်း
ျွန်ုပ်တွင် ကိုယ်ဝန်နေလျှင် သို့မဟုတ် မိခင်နို့တိုက်နေလျှင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံသင့်ပါသလား။
CDC က ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ မိခင် နို့တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ယခု သို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေသူ အားလုံးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို ထောက်ခံထားပါသည်။
CDC က COVID-19 ရှိသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မဟုတ်သူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပြင်းထန်သော ရောဂါအန္တရာယ် တိုးလာသည်ဟုလည်း ဆိုထားပါသည်။ COVID-19 ရှိသူ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များသည်လည်း COVID-19 မရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ နှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုက်လျှင် လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ တိုးလာနိုင်သည်။ မျိုးအောင်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအပါအဝင် ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုခု၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား မရှိပါ။
မိခင်နို့တိုက်နေပါသည် သို့မဟုတ် မကြာမီ မိခင်နို့တိုက်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် မိခင်နို့ရည်၏ ဘေးကင်းမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါသလား။
Society for Maternal-Fetal Medicine မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးအဖွဲ့ နှင့် Academy of Breastfeeding Medicine မိခင်နို့တိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာအဖွဲ့တို့မှ ကာကွယ်ဆေးများကြောင့် မိခင်နို့ဘေးကင်းမှုကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ယူဆစရာ ကြောင်းအရင်း မရှိကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးများ မပါဝင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးငယ်ကို ကူးစက်နိုင်ခြေ အန္တရာယ်မရှိပါ။ Pfizer နှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးတွင် mRNA ပါဝင်သော်လည်း mRNA သည် ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်သောကြောင့် မည်သည့်ကာကွယ်ဆေး အစိတ်အပိုင်းမှ မိခင်နို့ရည်ထဲ ဝင်ရောက်နိုင်ခြေမရှိပါ။
ရောဂါပိုးကူးစက်သောအခါ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်များသည် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ခုခံမှုပဋိပစ္စည်းများ (antibodies) ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ရောဂါခုခံသည့် ပဋိပစ္စည်းများသည် မိခင်နို့ရည်ထဲ ဝင်ရောက်နိုင်သည်၊ ထို့နောက် ကလေးငယ်ထံသို့ ရောက်ရှိပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်မှုမှ တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသည်။
IU Health ၏ ကျွမ်းကျင်သူများ အနေနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ သို့မဟုတ် မိခင်နို့တိုက်သူများအတွက် မည်သည့်အကြံပြုချက်များ ပေးမည်နည်း။
IU Health သည် CDC မှ အကြံပြုချက်များကို ထောက်ခံပါသည်။ IU Health က ကိုယ်ဝန်ဆောင် သို့မဟုတ် နို့တိုက်ကျွေးသူများသည် မိမိတို့၏ဆရာဝန်များနှင့် မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုလမ်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုထားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သို့မဟုတ် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသူများသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် ourshot.in.gov သို့ ဝင်ရောက်ပြီး မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
IU Health နေရာတွင် COVID-19 ကာကွယ်‌ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းရှိပါသည်။ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် နေရာအချက်အလက်များကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေနိုင်သနည်း။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် ရက်ချိန်းများအားလုံးကို အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန Indiana Department of Health ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် မှတစ်ဆင့် စီစဉ်ရမည်။ IU Health မှဖော်ပြထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသည့်နေရာများသည် ပြည်နယ်အနှံ့တွင်ရှိပါသည်။
လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ကားရပ်နားရန်အချက်အလက် နှင့် သွားရောက်သောအခါ တွေ့ကြုံမည့်အရာများ၊ စသည့်အချက်အလက်များ ရယူနိုင်ပါသည်။ သင့်အတွက် IU Health COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသည့်နေရာများကို ရှာဖွေပါ။
COVID-19 ရက်ချိန်းအတွက် မည်သို့ပြင်ဆင်ထားသင့်သနည်း။ ဘယ်အရာများကို ယူဆောင်သွားသင့်သနည်း။
နောက်ထပ်အသေးစိတ် အချက်အလက်များ နှင့် သ‌ဘောတူခွင့်ပြုချက်များ ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် တက်စ်ပို့ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်အကြောင်းကြားချက် လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ ဆေးခန်းတွင် သင်ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်ရခြင်းကို ရှောင်ရန်အတွက် ရက်ချိန်းမတိုင်မီ အချက်အလက်ကို ကြိုတင်ဖြည့်စွက်ထားပါ။
သင့်ရက်ချိန်းတွင် ဓာတ်ပုံပါသည့် အိုင်ဒီကဒ် နှင့် အာမခံကြေးကဒ်ကို ယူဆောင်သွားသင့်သည်။
သင့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသည်။ သင့်ထံမှ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အခြားသော ကျသင့်ငွေ တောင်းခံခြင်းများ မရှိပါ။ အာမခံကြေးအချက်အလက်ကို ယူပြီး သင့်အာမခံကြေး ကုမ္ပဏီထံမှ စီမံခန့်ခွဲရေးစရိတ် အနည်းငယ် တောင်းခံမည်၊ သို့သော် သင့်ကို ကုန်ကျစရိတ်တောင်းမည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်အနေနှင့် သိထားသင့်သော အခြားကိစ္စများတစ်ခုခု ရှိပါသလား။
အလုပ်မှ အလှည့်ကျခွင့်ယူနိုင်ရန် နှင့် သင့်လျော်သည့် ဝန်ထမ်းတာဝန်ခန့်အပ်မှုများ စီစဉ်နိုင်ရန်အတွက် သင့်အလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါသည်။ ဆေးနှစ်ကြိမ် ထိုးရသော ကာကွယ်ဆေးများဖြစ်ပါက ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ပိုမိုသိသာနိုင်သည်။
သင်ရောက်လာသောအခါ သင် ဖျားနာနေလျှင် သို့မဟုတ် ဆိုးဝါးသော မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခု ရှိခဲ့ဖူးလျှင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးမည့်သူကို ပြောပြပါ။
သင့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသည်။ သင့်ထံမှ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အခြားသော ကျသင့်ငွေ တောင်းခံခြင်းများ မရှိပါ။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ အနေနှင့် ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူရန်နှင့် ဆေးထိုးချင်သောသူတိုင်းကို ထိုးပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
အာမခံကြေးရှိပါက ကဒ်ကိုယူဆောင်လာပါ။ အချက်အလက်ကို ယူပြီး သင့်အာမခံကြေး ကုမ္ပဏီထံမှ စီမံခန့်ခွဲရေးစရိတ် အနည်းငယ် တောင်းခံမည်၊ သို့သော် သင့်ကို ကုန်ကျစရိတ်တောင်းမည် မဟုတ်ပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးမည့် ရက်ချိန်းသို့သွားရန်အတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့်အစီအစဉ်များ ရှိသနည်း။
သင့်ကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းသို့ အရောက် လာစေချင်ပါသည်။ ရွေးစရာနည်းလမ်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး သင့်အတွက်ကိုက်ညီမည့် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အကူအညီလိုအပ်လျှင် 1.888.IUHEALTH (1.888.484.3258) သို့ဖုန်းဆက်ပြီး လိုင်းခွဲနံပါတ်9ကိုရွေးပါ (နံနက် 8 နာရီမှ ညနေ5နာရီအထိ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ၊ စနေနေ့တွင် နံနက် 8 နာရီမှနေလည်အထိ)။
အာမခံကြေးမရှိလျှင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသလား။
ထိုးနိုင်ပါသည်။ သင့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသည်။ သင့်ထံမှ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အခြားသော ကျသင့်ငွေ တောင်းခံခြင်းများ မရှိပါ။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ အနေနှင့် ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူရန်နှင့် ဆေးထိုးချင်သောသူတိုင်းကို ထိုးပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးမည်ကို ရွေးချယ်၍ ရပါသလား။
သင့်ရက်ချိန်းကို ourshot.in.gov တွင် စီစဉ်သောအခါ ရယူနိုင်မည့် ကာကွယ်ဆေး(များ) ကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။
Pfizer နှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးများသည် ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုတေသနတွင် ပါဝင်သူများအနေနှင့် ဒုတိယအကြိမ်ဆေးထိုးပြီး ခုနှစ်ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ထိရောက်မှု အပြည့်အဝ ရရှိသည်။
Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်တည်းသာထိုးရသည်။ သုတေသနတွင် ပါဝင်သူများအနေနှင့် ဆေးထိုးပြီး 28 ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ထိရောက်မှု အပြည့်အဝ ရရှိသည်။
လိုအပ်လျှင် ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းကို မည်သို့စီစဉ်ရမည်နည်း။
Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် ပထမရက်ချိန်းတွင် ရှိနေစဉ် ဒုတိယအကြိမ် ဆေးထိုးမည့် ရက်ချိန်းကို စီစဉ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ပထမရက်ချိန်းအတွက် နေ့ရက်/အချိန် ရွေးချယ်သောအခါ ဒုတိယအကြိမ်အတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားပါ။ ပထမရက်ချိန်းသို့ သွားပြီး 21 ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ထိုနေရာသို့ ပြန်သွားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည် (Pfizer ကာကွယ်‌ဆေး)၊ သို့မဟုတ် 28 ရက်နောက်ပိုင်း ပြန်သွားနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည် (Moderna ကာကွယ်ဆေး)။
ဤကာကွယ်ဆေးများ၏ ဒုတိယတကြိမ်ထိုးရန်ဆေးကို အကြံပြုထားသည့် အချိန်ကန့်သတ်မှုအတွင်း ထိုးသင့်သည်။ CDC ၏အကြံပြုချက်အရ အဆိုပါကန့်သတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း ဆေးမထိုးနိုင်လျှင် ပထမအကြိမ်ဆေးထိုးပြီး‌နောက်6ပတ် (42 ရက်) အထိ ရက်ချိန်းစီစဉ်နိုင်သည်။
တစ်ရက်စာအတွက် မသုံးရသေးသော ကာကွယ်ဆေးရှိလျှင် ဆေးခန်းသို့ ရက်ချိန်းမရှိပဲ ဆေးထိုးရန် ရောက်လာသူများကို လက်ခံပါသလား။
IU Health ဆေးခန်းတစ်ခုခုတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးသူတိုင်းသည် ရက်ချိန်းအတွက် အမည်စာရင်း ပေးထားရပါသည်။ ဆေးခန်းအနေနှင့် ထိုတစ်ရက်စာအတွက် ထိုးပေးနိုင်မည့် ကာကွယ်ဆေး အရေအတွက်ကို စီမံခန့်ခွဲသည့် အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးခန်းဖွင့်ချိန်အဆုံးပိုင်းတွင် မသုံးရသေးသော ကာကွယ်ဆေးများ ကျန်မနေစေရန်အတွက် ဆေးခန်းအနေနှင့် အခြားသော ကာကွယ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲသည့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးလည်း ရှိပါသည်။
အရွယ်မရောက်သေးသော (အသက် ၁၈နှစ်အောက်)ကလေးငယ်တစ်ဦး ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုရယူရန် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦး အတူပါရှိရန် လိုအပ် ပါသလား။ ၎င်းတို့အနေနှင့် သဘောတူညီချက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသလား။
နာမည်စာရင်းပေးသွင်းစဥ်တွင် အသက် ၁၈နှစ်အောက်ကလေးများ ကာကွယ်‌ဆေး တစ်ခုရယူရန်အတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူတစ်ဦးမှ သဘောတူရပါမည်။ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူအနေနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့်နေရာတွင် အရွယ်မရောက်‌သေး သောသူနှင့်အတူရှိရန် လိုလားပါသည်။
ဤအရာသည် အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပြီး ထိုသို့သော အခြေအနေ များအတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများသည် စာဖြင့် သို့မဟုတ် နှုတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ပေး နိုင်ပါသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ဘေးကင်းမှု
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို စိတ်ချရပါသလား။
စိတ်ချရပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးများသည် စိတ်ချရပြီး ထိရောက်ပါသည်။ FDA အနေနှင့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်များမှ ရရှိသော ဘေးကင်းမှု ‌ဒေတာအချက်အလက် အားလုံးကို သေချာစွာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး အကျိုးခံစားမှုများသည် ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်ထက် ပိုများမှသာ ကာကွယ်ဆေးများကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးများကို အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့် ရရှိရန်အတွက် ထောင်နှင့်ချီရှိသော လူနာများပါဝင်သည့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများ မှတစ်ဆင့် အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကို အောင်ရသည်။
ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်များတွင် ကျား၊ မ၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုး နှင့် မျိုးနွယ်စု၊ စသည့်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသော လူအမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။ Pfizer ၊ Moderna နှင့် Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးများသည် ထိရောက်မှုရှိပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဒေတာအချက်အလက်များကိုလည်း အများပြည်သူသိရှိရန် မျှဝေထားပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့မှ ရလဒ်များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့် ပေးပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံသည်ဟု အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Moderna ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက်စာရွက် (FDA) ကိုဖတ်ရှုရန်
Pfizer ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက်စာရွက် (FDA) ကိုဖတ်ရှုရန်
Janssen (Johnson & Johnson) ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက်စာရွက် (FDA) ဖတ်ရှုရန်
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို အဘယ်ကြောင့် လျှင်မြန်စွာ အတည်ပြုခဲ့သနည်း။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို လျှင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်ပြီး လျှင်မြန်စွာအတည်ပြုသော်လည်း ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အစွမ်းထက်မှု နှင့် အရည်အသွေး ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း သိရှိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ဖူးသော အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ဆေးများထဲမှ တချို့အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု များစွာရရှိနိုင်ခဲ့သည်။
နည်းပညာကြောင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို လနှင့်ချီကြာ၍ မွေးစရာ မလိုအပ်ပါ။
COVID-19 ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သောသူ များစွာတို့ကို လနှင့်ချီ သို့မဟုတ် နှစ်ချီ ကြာမည့်အစား ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း လျှင်မြန်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးများကို "at risk" အန္တရာယ်ကို လက်ခံ၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ FDA ၏ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်နေရင်း ကာကွယ်ဆေးများကို ဆေးရုံများသို့ နာရီပိုင်းအတွင်း ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆေးအရေအတွက်များစွာ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အတည်ပြုချက်ရရှိပြီးမှ ထုတ်လုပ်ကြသည်။
ဤအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများကြောင့် ဆေးရုံများ နှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေး ကုသစောင့်ရှောက်မှု နေရာများ အနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေး လက်ခံရရှိရန် လိုအပ်သည့်အချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
မတည့်သည့်အရာများ သို့မဟုတ် မတည့်သည့်အရာများကြောင့် ဆိုးဝါးသည့်တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ဖူးသည့်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးသင့်သလား။
IU Health အနေနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း နှင့် မတည့်သည့်အရာများ သို့မဟုတ် မတည့်သည့်အရာများကြောင့် ဆိုးဝါးသည့်တုံ့ပြန်မှုများ ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး CDC ၏ အကြံပြုမှု လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။
ဆေးဝါးများ၊ အစားအစာများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ ပိုးမွှားများ၊ ပိုးအဆိပ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရော်ဘာလက်အိပ်၊ စသည့်အရာများနှင့် မတည့်သည့် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးလျှင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် သင့်ကို 15-30 မိနစ်ကြာ စောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။
(Anaphylaxis ဆိုသည့် မတည့်သည့်အရာကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး ဆိုးဝါးသည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်း အပါအဝင်) ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် ကုသမှုအတွက် ထိုးဆေးများနှင့် ချက်ချင်းမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ဖူးလျှင် သတိထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်သည်၊ နောက်ထပ်မေးခွန်းများ မေးမြန်းနိုင်ပြီး စောင့်ဆိုင်းခန်း/စောင့်ကြည့်ရန်အချိန်ကို 30 မိနစ်ထက်ပိုပြီး ထပ်တိုးရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ကာကွယ်ဆေးများတွင် ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုနှင့် မတည့်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလျှင် ယခုအချိန်တွင် ထိုကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါ။
သင့်ကို EpiPen သုံးရန် ဆရာဝန်ဆေးညွှန်း ပေးထားခဲ့လျှင် လက်ဝယ်ထားရှိသော်လည်း EpiPen သုံးရလောက်အောင် အသက်အန္တရာယ်ပြုပြီး ဆိုးဝါးသည့်တုံ့ပြန်မှု မရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် epinephrine ဆေးဖြင့် ကုရသည့် အရေးပေါ်ကုသမှု မလိုအပ်ခဲ့လျှင် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းများ မေးမြန်းနိုင်ပြီး စောင့်ဆိုင်းခန်း/စောင့်ကြည့်ရန်အချိန်ကို 30 မိနစ်ထက်ပိုပြီး ထပ်တိုးရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကာကွယ်ဆေးကို ပထမအကြိမ် ထိုးပြီးနောက် မတည့်၍ ဆိုးဝါးသည့်တုံ့ပြန်မှု၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်ဆိုးဝါးမှု အဆင့်မျိုးမဆို ချက်ချင်းမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဒုတိယအကြိမ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အဘယ်ကြောင့် ထိုးသင့်သနည်း။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိသမျှနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ကို နှင့် အခြားသူများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် CDC ၏အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာခြင်းများ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် COVID-19 မှ အကောင်းဆုံး အကာအကွယ်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် သင်ကိုယ်တိုင်၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် COVID-19 ရောဂါမဖြစ်အောင် တားဆီးကာကွယ်ရာတွက် အထောက်အကူပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးသည် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းသည့် နည်းလမ်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ကလေးသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုး သင့်သနည်း။
ကလေးများသည် အန္တရာယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသော မည်သည့်ကလေးများတွင် ကျောင်းပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှားပါးသောအခြေအနေ များတွင် ဆေးရုံတက်ရနိုင်ခြင်းစသည့် ဆိုးရွားသောရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ် လာမည်အား ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲပါသည်။ အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြား ကလေးများ တွင် Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအပေါ် သုတေသနပြုချက်အရ ၎င်းသည် ဘေးကင်းကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများတွင် ဘေးကင်းမှုပြဿနာအသစ်များ မတွေ့ရှိရပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက်
COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် ဘယ်အရာများဆက်ဖြစ်မည်နည်း။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် သင် နှင့် သင့်အနီးအနားရှိသူများကို ကာကွယ်မည့် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော မေးခွန်းများ ရှိလျှင်ရှိနိုင်သည်။ "မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသနည်း။" "ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် COVID-19 ရောဂါရနိုင်သေးပါသလား။" "မျက်နှာဖုံးတပ်စရာ လိုအပ်ပါသေးသလား။"
ထိုကဲ့သို့မေးခွန်းများ အားလုံးနှင့် အခြားသောမေးခွန်းများကို ဤနေရာတွင် ဖြေကြားထားပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ဘာဖြစ်လာမည်နည်း
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသလား။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်အထိ ရှိနိုင်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့် ကာကွယ်မှုတည်ဆောက်သည့် သာမန်လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်လေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု နှင့် ဆေးထိုးထားသည့်လက်မောင်း ရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ပူခြင်း၊ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း နှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် 48 နာရီအတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် စဖြစ်သည့်အချိန်မှ 24 နာရီအတွင်း ပျောက်သွားလျှင် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် 24 နာရီထက်ကြာ၍ ဖြစ်နေလျှင် အိမ်တွင်နေပြီး IU Health ၏ ရုပ်သံမှတစ်ဆင့် Covid-19 ရောဂါကို လှမ်းပြီးစစ်ဆေးမှု လုပ်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ပါ။
US တွင် ဖြန့်ဝေရန် လတ်တလော အတည်ပြုထားသော ကာကွယ်ဆေးများ အားလုံးသည် စိတ်ချရပြီး COVID-19 ကြောင့် ဆိုးဝါးသည့် နာမကျန်းဖြစ်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်ရန် များစွာထိရောက်ပါသည်။ မည်သည့် ကာကွယ်ဆေးမဆို ကာကွယ်မှုသည် ချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့် ကိုယ်ခံအားတည်ဆောက်ရန် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာပါသည်။
ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများမှ ရရှိသော ဒေတာအချက်အလက်အရ အသက်ပြည့်သူများအကြား COVID-19 ကာကွယ်ရာတွင် Pfizer ကာကွယ်ဆေးသည် 95 ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်ပြီး Moderna ကာကွယ်ဆေးသည် 94.1 ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်သည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ Moderna နှင့် Pfizer ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးသည် ဒုတိယအကြိမ်ဆေးထိုးပြီး နှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် ကာကွယ်မှု အပြည့်အစုံပေးပါသည်။
Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးသည် ဆေးထိုးပြီး နှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် အသင့်အတင့်ဖြစ်သော/ဆိုးဝါးသော ရောဂါမှ ကာကွယ်မှု စတင်ပါသည်။ U.S. ၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု အချက်အလက်အရ J&J ကာကွယ်ဆေးသည် ဆေးထိုးပြီး တစ်လအကြာတွင် အသင့်အတင့်မှ ဆိုးဝါးသည့်အဆင့်ရှိသော ရောဂါအပေါ် 72 ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှုရှိပါသည်၊ ထို့အတူ ဆိုးဝါးသည့်နာမကျန်းဖြစ်မှုအပေါ် 85 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး သေဆုံးမှုမှ 100 ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်မှုပေးသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးမှ ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသလား။
မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးများတွင် ရှင်သန်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ မပါပါ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ခြင်း နှင့် အကွာအဝေးခြား၍ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းများ လိုအပ်သေးပါသလား။
သင် သို့မဟုတ် သင်နှင့်နီးစပ်သောသူ တစ်ဦးဦးအနေနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့်တိုင် မျက်နှာဖုံးကို ဆက်လက်တပ်ဆင်ရန် နှင့် အကွာအဝေးခြား၍ လူစုလူဝေးရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ဆေးထိုးပြီးနောက် ကိုယ်ခံအား စတင်တည်ဆောက်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ထိရောက်မှုအပြည့်အစုံ ရရှိရန်အတွက် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးမှ ရရှိသော ကာကွယ်မှုသည် မည်မျှကြာရှည်ခံမည်ကိုလည်း မသိရသေးပါ။
ထို့ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ထပ်မံ၍မရရှိမီ နှင့် လူအများစုကို ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားမီအထိ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ဆက်လုပ်သင့်သည်။